Bancedisa ukuqinisekisa ukuba abathengi beendaba bafumana ulwazi oluphezulu
Ngokukhawuleza umfundi we-journalism waseYunivesithi yaseMaldan wandibuza malunga nokuziphatha kweendaba . Wabuza imibuzo ecacileyo kunye nengqiqo eyangenza ndicinga ngokucokisekileyo ngale ndaba, ngoko ndagqiba ekubeni ndifake iimbuzo zakhe kunye nezimpendulo zam apha.
Yintoni ebalulekileyo yokuziphatha kwi-Journalism?
Ngenxa yoLungiso lokuqala kuMgaqo -siseko wase-United States, umshicileli kweli lizwe akalawulwa nguRhulumente.
Kodwa oko kwenza ukuziphatha kwezentengiselwano kubaluleke kakhulu, ngenxa yesizathu esicacileyo sokuba ngamandla amakhulu athatha uxanduva olukhulu. Omnye udinga ukujonga kuphela kwiimeko apho i-ethics ethics ethi iphuliwe - umzekelo, i-fabulists enjengeStefen Glass okanye i -scandal ye-scandal ka-2011 eBrithani- ukubona iimpembelelo zeendaba ezimbi. I-newsletters kufuneka zilawulwe ngokwazo, kungekhona nje ukugcina ukuthembeka kwabo kuluntu, kodwa ngenxa yokuba zibeka ingozi yokuba urhulumente uzama ukwenza njalo.
Ziziphi iindawo eziphambili zokuziphatha ezithintekayo?
Kukho ixesha elininzi ukuxubusha malunga nokuba ngaba intatheli kufuneka zibe nenjongo okanye zithethe inyaniso , ngokungathi ezi ziinjongo eziphikisanayo. Xa kuziwa kwiingxoxo ezinjengezi, umelekthazo kufuneka wenziwe phakathi kwemiba apho inyaniso enokuthi ifumaneke khona kunye nemibandela enemibala emnyama.
Ngokomzekelo, intatheli ingenza ibali lokuphonononga izibalo malunga nesohlwayo sokufa ukuze kutholakale ukuba ingaba ngumqobo.
Ukuba izibalo zibonisa iqondo lokubulala abantu ngokuthe gqithwa ngokubhekiselele kwisigwebo sokufa, oko kungathi kubonakale kubonisa ukuba ngokwenene kunqandekile okanye kulandelelana.
Ngakolunye uhlangothi, isigwebo sokufa nje? Le ngxaki yefilosofi eye yaxutyushwa iminyaka emininzi, kwaye imibuzo ephakamisayo ayikwazi ukuphendulwa ngokunyanisekileyo ngumbandela weendaba .
Kuba intatheli, ukufumana inyaniso isoloko iinjongo ezigqithiseleyo, kodwa loo nto inokuba nzima.
Ingaba i-Concept of Objectivity Ishintshile ukususela ekuqaleni koMsebenzi wakho kwi-Journalism?
Kwiminyaka yakutshanje, ingcamango yokugxeka ihlekisiwe njengento ebizwa ngokuba yi-media media. Uninzi lwezimbonakalo zedijithali zithi ukunyaniseka kweqiniso akunakwenzeka, kwaye ngoko ke intatheli kufuneka zivulekele ngeenkolelo zabo kunye nokunyaniseka njengendlela yokukhanya ngokucacileyo nabafundi babo. Andivumelani nalo mbono, kodwa ngokuqinisekileyo yinto eye yaba nefuthe, ngokukodwa kwiindawo ezitsha zentengiso kwi-intanethi.
NjengeNkqantosi, Ngaba Ucinga ukuba ii-Journalists zihlala zibeka phambili phambili? Ziziphi iindaba zeentatheli ezenza ngokuchanekileyo namhlanje, ngokuzigcina zijongene neNjongo?
Ndicinga ukuba i-objectivity isabaluleka kwiindawo ezininzi eziphathekayo, ngokukodwa kwiindawo ezibizwa ngokuba nzima kwiimaphephandaba okanye kwiwebhsayithi. Abantu bayakulibala ukuba ininzi yephephandaba lemihla ngemihla liqukwa ngombono , kwii-editori, ubugcisa bezobugcisa nokuzonwabisa kunye necandelo lezemidlalo. Kodwa ndicinga ukuba abaninzi abahleli kunye nabavakalisi, kunye nabafundi ngolu hlobo, basoloko bexabisa ukuba nezwi elingakhethiyo xa kufikelele kwiindaba ezilukhuni. Ndicinga ukuba kuyiphutha ukuphazamisa imigca phakathi kweengxelo zengxelo kunye neembono, kodwa oko kuya kwenzeka, ngokugqithiseleyo kwiinkcukacha zonxibelelwano zeendaba.
Liliphi Ikamva leNjongo yoLwazi? Ngaba Ucinga Ukuba Ingxabano Yokulwa Neengxaki Ngeze Kuphumelele?
Ndicinga ukuba imbono yokungabi namkhethe iya kuqhubeka ixabiseke. Ngokuqinisekileyo, abaxhasi be-anti-objectivity bacebile, kodwa andicinga ukuba iindaba ezijoliswe kwiinjongo ziza kutshabalala nanini na ngokukhawuleza.
Iingcebiso ezithandathu zokuBhala iindaba eziza kubamba i-Reader's Attention
Indlela yokuyifumana xa iWebhu Page ligqityiwe
Abahwebi bee-Slave zaseAfrika: Imbali
I-1920 Wall Street Bombing
Ukufikelela Kwiinyanga Zasebusika KwiKlasi Yakho
I-Fix-A-Flat: Yimangaliso okanye i-Nightmare?
Top 10 John Mayer Iingoma
Ukulandela - ukulandela
Iiprojethi ezi-5 eziPhambili zeWebhu ezineZiko leMveli lokuzalwa kweNkanyezi
Gcina iPerseid Meteor Shower
Imihla ebalulekileyo kwimbali yaseMexico
Yisiphi Isikolo SamaBuddha Esilungile?
Mayelana neSakhiwo seNkundla ePhakamileyo se-US
Indlela Yokufundisa Umxholo